Garsoore Xasan Baari Oo Dhex Dhexaadiye Ka Ah Kulan Adag Ee U Dhaxeeyo Kooxaha KCC VS Rivers,Yaase La Shaqeyndoono?
Thursday, July 19th, 2018 - 07:01:02
Saturday June 03, 2017 - 09:53:32 in Wararka by Kubad Bile
Afar ka mid ah garsooryaasha heerka caalami dalkeena Soomaliya ku sugan caasimada Kampala ee dalka Uganada,iyagoo galabta dhex dhexaadindoono kulan ka tirsan CCC 2017.
Garsoorayaasha ku sugan Kampala waxa ay kala yihiin Xasan Maxamed Xaaji (Xasan Baari),Xamze Xaaji Cabdi,Suleyman Bashiir Sheikh Cabdi iyo Garsoore Bashiir Colaad Carab.
Garsoorayaasha heerka caalami ee dalkeena ayaa galabta oo ay taariikhdu tahay 03-June 2017 dhex dhexaadino kulan adag ee u dhaxeeyo kooxaha ka dhisan dalalka Uganda iyo Nigeria ee kala ah Kampala Capital City Authority FC iyo Rivers United,xili labada ay kuwada ciyaaidnoonaan garoonka lagu magacaabo Phillip Omondi Stadium ee dalka Uganda.
Garsoore Xasan Maxamed Xaaji (Xasan Baari) ayaa ah garsooraha dhexda,Calanhayaha 1-aad Xamze Xaaji Cabdi,Calanhayaha 2-aad Suleyman Bashiir Sheikh Cabdi,halka garsooraha afaraad ama garsooraha keydka uu yahay garsoore Bashiir Colaad Carab.
25-May-2017:-Garsoore Xasan Bari ayaa dhex dhexaadiye ka ahaa kulan ciyaareedki u dhaxeeyay dalalka 17-jirada Mali iyo Angola,iyagoo qeyb ka ahaa 8-dal Afrika oo ka qeyb gashay tartan da’yarta Caf oo sanadkan marti geliyay dalka Gabon.
Afarta Garsoore ayaa si wadajir ciyaaro kala duwan ugu soo qabtay dalalka qaarada Afrika laga bilaawo Janauary,Febraayo,Maarso,halka garsoorayaasha kala ah Xasan Baari iyo Bashiir Colaad ay si wadajir u shaqeeyeen afartii bil ugu horeesay sanadka cusub 2017.
Tartanka:-Confederation Cup 2017
Kooxaha: - KCC VS Rivers United
Saacada: - 4:00pm
Cimiladda Xiliga Ciyaarta: -(68.0°F)
Garsoorka:-Xasan Maxamed Xaaji (Xasan Baari)
Garoonka: - Phillip OMondi Stadium